तृणमूल कार्यकर्ताले कहाँबाट ल्याउँदैछन् बन्दुक र बम? : तृणमूल काङ्ग्रेसबीच झगडा : एकापासमा गोलीबारी, बमबारी : - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचार तृणमूल कार्यकर्ताले कहाँबाट ल्याउँदैछन् बन्दुक र बम? : तृणमूल काङ्ग्रेसबीच झगडा : एकापासमा गोलीबारी, बमबारी :
‘हमीदुल र मजिरुद्दिनको घरमा बदमासहरूले अचानक गोलीबारी र बमबारी गऱ्यो। हमीदुलका दाजु घाइते भए। मजिरुद्दिनका पत्‍‌नी मजिना खातुन एवं उनको छोरा मन्सुर आलमले जहाँगिर आलम र उसको भाई नईसुर आलमलाई घटनामा सामेल रहेको आरोप लगाएका छन्।’
कलकत्ता, 28 सेप्टेम्बर
राष्ट्रीय दैनिकहरूले तृणमूल काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच गोलीबारी अनि बमबारी भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। उत्तर दिनाजपुरमा यस्तो घटना देखा परेको छ। समाचारअनुसार तृणमूल काङ्ग्रेसका दुइ गुटबीच गोली हानाहान र बम फ्याँकाफ्याँक भएको हो। दर्जनौं तृणमूल कार्यकर्ताहरू घाइते बनेका छन्।
घाइते सूचीमा पञ्चायत प्रधान मोहम्मद हमिदुलका दाजु मजिरुद्दिन अहमदको पनि नाम छ। उत्तर दिनाजपुर जिल्लाको चोपड़ा थानाको मञ्झायारी ग्राम पञ्चायतको हाँसकारी गाउँमा यो घटना भएको हो।
घाइते मजिरुद्दिनलाई इस्लामुर अस्पताल लगिएको छ। तृणमूल नेता एवं पूर्व प्रधान जहाँगिर आलम अनि उनको दाजु नईसुर आलमले गोलीबारी र बमबारी गरेको आरोप छ। थाहा पाउने वित्तिकै पुलिस त्यहाँ पुगेर स्थितिलाई साम्य गरिएको हो।
तृणमूल नेता मजिरुद्दिनका परिवारले तृणमूल नेता तृणमूल नेता एवं पूर्व प्रधान जहाँगिर आलम अनि उनको दाजु नईसुर आलमहरू विरुद्ध चोपड़ा थानामा प्राथमिकी दर्ता पनि गरेको छ।
‘हमीदुल र मजिरुद्दिनको घरमा बदमासहरूले अचानक गोलीबारी र बमबारी गऱ्यो। हमीदुलका दाजु घाइते भए,’ पुलिसले भनेको छ, ‘मजिरुद्दिनका पत्‍‌नी मजिना खातुन एवं उनको छोरा मन्सुर आलमले जहाँगिर आलम र उसको भाई नईसुर आलमलाई घटनामा सामेल रहेको आरोप लगाएका छन्।’
अहिलेसम्म बिहानै गोलीबारी र बमबारी गर्नेहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन। अचम्मको कुरा के हो भने न त पुलिसले गोलीबारी र बमबारी गर्न तृणमूल नेताहरूमा बन्दुक र बम कहाँबाट आइरहेको छ, त्यसको खोजी गरेको छ न त पक्राउ नै गरेको छ।
यता दार्जीलिङमा भने त्यही बङ्गालको पुलिसले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीलाई बन्दुक बोकेको, बम पड्काएको भन्दै विभिन्न मुद्दाहरू थोपेको छ। त्यहीँ उत्तर दिनाजपुरमा तृणमूल काङ्ग्रेसका नेताहरू हातहतियार र बमहरू बोकेर हिँड्नु मात्र होइन कुनै आतङ्की सङ्गठनलेजस्तो सोझै गोलीबारी र बमबारी गर्दासमेत कुनै पहल गरेको समाचार कुनै पनि राष्ट्रीय दैनिकले प्रकाशित गरेको छैन।
पूर्व मञ्झायारी ग्राम पञ्चायतको बोर्ड गठन गरिएको थियो। जसमा हमिदुललाई प्रधान बनाइएको थियो। त्यहीदिनदेखि त्यहाँ तृणमूल काङ्ग्रेसबीच फुट आएको हो। पुलिसले मामिलाबारे जाँच गरिरहेको बताएको दैनिकहरूले समाचार प्रकाशित गरेको छ।